China 1350KG, 1500KG Rudzi rweMagnetic Formwork System vagadziri uye vanotengesa | Meiko Magnetics
1350KG kana 1500KG mhando yemagineti formwork system ine kabhoni simbi ganda iri zvakare yakajairwa simba remhando yerudzi rwe precast plateform fixing, iyo inokurudzirwa kwazvo kuti ishandiswe kugadzirisa sidemould mune precast kongiri sandwichji mapaneru. Inogona kukodzera musimbi formwork kana yemapuranga plywood formwork.
1350KG kana 1500KG Magnetic Formwork System iriwo yakajairwa simba mhando mhando ye precast kongiri plateform inogadzirisa, iyo inokurudzirwa kwazvo kuti ishandiswe kugadzirisa sidemould mune precast kongiri sandwich mapaneru. Inogona kukodzera musimbi formwork kana yemapuranga plywood formwork, ine akasiyana maadapter kana kudzvanya mabhaudhi.
Mushure bhatani rakadzvanywa, iwo magineti ebhokisi anobata tafura yakasimba. Zviri nyore kuroverera ndiro yesimbi pahwendefa rematanda nezvipikiri.Inogona kumisikidzwa nekungodzvanya pasi bhatani neruoko kana tsoka. Kuti usazvishandise, magineti anosunungurwa zviri nyore nesimbi lever (kudhonza bhatani pa). Mune isingashande nzvimbo, iwo magineti ekuvhara anogona kubviswa zviri nyore kubva patafura fomu. Iwo precast kongiri magineti aigona kushandiswa ega kana kubatana neadpator kugadzirisa mafomu. Kazhinji 1350Kg yakatarisana neuto bhokisi remagineti rakaringana 80-150mm ukobvu pamadziro ekugadzirwa. Zvakare, isu tinokwanisa manfuacture mamwe magetsi foce bhokisi magineti, kunyangwe se2500KG, 3000KG mhando sekuda kwako.
Nekuda kwezviitiko zvedu zvakapfuma pane precast kongiri mapurojekiti 'anotevera, isu, Meiko Magnetics, tinokwanisa kugadzira nekugadzira ese akakura magineti mhinduro ye precast kongiri yezvinhu fekitori, zvisinei mabhokisi emabhokisi, akaiswa magineti, magineti epombi, magineti ekuzorora ekare kana mamwe magineti. masisitimu mune precast mafomu.
ZVINOKOSHA ZVINOKOSHA ZVE Precast Shuttering Magnet:
1.Kuderedza kuomarara uye nguva yekumisikidzwa kwefomu (kusvika 70%).
2. Universal use for mass production of concrete products, uye zvidimbu zvigadzirwa zvemarudzi ese patafura imwe chete yesimbi.
3. Inobvisa kudikanwa kwekutunga, magineti ekuvhara haakuvadze tafura yesimbi.
4. Inoita kuti ikwanise kuburitsa zvigadzirwa zveRial. Mafomu Anodzivirira Magnet ePrecast Plant
5. Mari shoma yeseti yemagineti. Ivhareji payback yemwedzi inenge mitatu.
6. Kubatsira kukuru kwemagineti ekuvhara ndeyekuti iwe haufanire kuve nemhando dzakasiyana dzakasiyana dzezvigadzirwa zvakasiyana, unofanirwa kunge uine seti yemagineti, maadapter emhando dzakasiyana dzemabhodhi uye tafura yesimbi. Precast Kongiri Shuttering Magnet Bhokisi 900kg
Type L W H Screw Simba NW
Pashure: 900KG, 1Ton Bhokisi Magineti EPrecast Tilting Tafura Mould Kugadzirisa
Zvadaro: 1800KG Shuttering Magnets neOne / Off Bhatani yeakagadzirirwa Preform Fomu Rekuvaka System
1.5Ton Kugona Bhatani Magnet
1350KG Fomu Yemagineti
1350Kg Magnet Bhokisi
1350KG Precast Kongiri Magineti
1500KG Bhokisi Remagineti
1500KG Magnetic Bhokisi
1500KG mhando yebhokisi magineti
450KG Bhokisi remagineti nePush-dhonza Bhatani
900KG, 1Ton Bhokisi magineti e Precast Tilting Tab ...